Android Lollipop ပါသော HTC One M8 | Androidsis
Android Lollipop ပါသော HTC One M8 ဗီဒီယို
Francisco Ruiz | | HTC က, NOTICIAS, Android ဗားရှင်း
ထိုင်ဝမ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်အရှိဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာတစျခု HTC က၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်မှာသေချာသည် ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အလွှာ သင်၏ Android terminal များအတွက် စိတ်ကြိုက်အလွှာတစ်ခုကို HTC Sense အဖြစ်လူသိများသောသူ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်း HTC Sense ၅ ပြီးသား၏လက်မှလုံးဝသက်တမ်းတိုးရောက်ရှိလာသည် Android Lollipop.
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Manuel Ramirez မင်းကိုပြပြီးပြီ Android 8 Lollipop ဗားရှင်းသစ်ကိုရိုက်ကူးသည့် HTC One M5.0.1 ၏ပထမဆုံးသီးသန့်ပုံရိပ်များ။ အခုအချိန်မှာငါတို့ဟာမင်းကိုပြသဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပြီ Android Lollipop ဖြင့် HTC One M8 ကိုအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်ကြည့်ရှုသည့်ဗွီဒီယိုအပြည့် ၎င်းင်း၏ဆုရ HTC Sense 6.0 အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ကိုသွားနေစဉ်။
တကယ်တော့များအတွက်ဗီဒီယိုများ လှုပ်ရှားမှုတွင် HTC One M8 ကို Android Lollipop လှိမ့်လှန်ကြည့်ပါ သူတို့ကနှစ်ခုဗီဒီယိုကန့်သတ်ထားပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်ပထမဆုံးတစ်ခုကအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို Android Lollipop အကြောင်းကြားစာဘားသို့မဟုတ်ကုလားကာ၊ Android ဆက်တင်များထဲမှတိုက်ရိုက်ရှာဖွေခြင်းရွေးစရာမှတဆင့်လျင်မြန်စွာရှာဖွေခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသော interface အသစ်ကိုပြသသည်။ ဒါမှမဟုတ် လွယ်ကူသော mode ကို Android terminal ကိုအသုံးပြုသောအခါရှုပ်ထွေးမှုကိုမလိုလားသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်ပြနေသောဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအသစ်များ ၏ဤဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ HTC One M8 မှ Android Lollipop.
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တွေ့တွင်အသစ်နှင့်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဗားရှင်းကိုမြင်နိုင်သည့်အတော်လေးတိုတောင်းသောဗွီဒီယိုနှစ်ခု Android 5.0.1 Lollipop သည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံစုံနိုင်ငံ၏အဓိကအချက်အချာကျသောနေရာတွင်ရှိသည်, HTC One M8
နောက်ဆုံးတွင် HTC သည်၎င်း၏နေ့ရက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း HTC One M8 နှင့် HTC One M7 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်ပါထိုင်ဝမ်မှကတိထားသည့်နေ့ရက်ပြည့်စုံသည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်နှစ်တွင်နှစ် ဦး စလုံးအပြီးသတ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် HTC One M8 နှင့် HTC M7 ကိုတရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်ဗွီဒီယိုနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့မြင်ရသော HTC တည်ဆောက်သူမှရိုက်ကူးထားသောဗွီဒီယိုနှစ်ခုလုံးတွင်မြင်နိုင်သောအတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုဗားရှင်းများ၏အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုကြောင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Android Lollipop ပါသော HTC One M8 ဗီဒီယို
Nokia C1 မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝယ်ယူပြီးနောက် Nokia ၏ပထမဆုံး Android ဖုန်း?
Android Lollipop မှအသုံးပြုသူအသစ်နှင့် user ည့်သည်သုံးစွဲသူရွေးချယ်မှုအကြောင်း